ZBO Salamo oxygène niteraka fitaovana - China Hangzhou Poly Air Separation Fitaovana
Fanerena ny asa: Moa ny miova fanerena fitaovana mitroka taranaka oksizenina dia nianatra mampiasa zeolite molekiolan'ny sivana toy ny adsorbent, mampiasa ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption (Salamo) oksizenina fitaovana. Under sasany fanerena, ny fampiasana ny azota eny amin'ny rivotra ny safidy ny zeolite molekiolan'ny sivana ambonin'ny adsorption toetra, izany hoe ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorption ny azota dia be mihoatra noho ny habetsaky ny oksizenina, ny dingana ho fehezin'ny plc pneumatic miditra tsimoramora. ..
Fanerena ny asa:
Dia miova fanerena fitaovana mitroka taranaka oksizenina dia nianatra mampiasa zeolite molekiolan'ny sivana toy ny adsorbent, mampiasa ny fitsipiky ny tsindry savily adsorption (Salamo) oksizenina fitaovana.
Under sasany fanerena, ny fampiasana ny azota eny amin'ny rivotra ny safidy ny zeolite molekiolan'ny sivana ambonin'ny adsorption toetra, izany hoe ny zeolite molekiolan'ny sivana adsorption ny azota dia be mihoatra noho ny habetsaky ny oksizenina, ny dingana ho fehezin'ny plc pneumatic miditra tsimoramora fanokafana ary ny famaranana, A, B roa na mihoatra Tata Alternate tsingerin'ny, A tilikambo pressurized adsorption ny oksizenina, manala ny tilikambo A banga dingana fahaterahana indray, ny fisarahana tanteraka ny oksizenina sy ny azota, dia ilaina ny mahafeno fepetra ny fahadiovan'ny oksizenina.
Special tsindry fitaovana fiarovana, mainka ny fanompoana fiainan'ny zeolite molekiolan'ny sieves;
Mandeha ho azy tsy nahay oxygène fanodinana famolavolana, mahomby hampihenana ny angovo ny fitaovana;
Oxygène famokarana: 1 ~ 600 nm3 / h
Ny oksizenina fahadiovana: 25% ~ 95%
Oxygène tsindry: 0.1 ~ 0,55 MPa (Adjustable)
Ando teboka, oksizenina: - 40 ℃ ~ 60 ℃
Previous: VPSA vacuum oxygène niteraka fitaovana
Next: ZBN Salamo azota fanaovana fitaovana
Bray avo fampisehoana lolo valves
ZDY Micro adsorption Compressed karazana rivotra fanamainana
YBT manokana fanadiovana fitaovana mandatsa-dranomaso maina